उसको शहर र उसका भेडाहरू | मझेरी डट कम
"यहाँ यस्तै हो," मेरो साथीले भन्यो। "सधैं यही बेलातिर पहिलो हिउँपर्छ। र अब जाडो शुरु हुन्छ।"
"अलि पछि त साह्रै, साह्रै, साह्रै जाडो हुन्छ।"
हामीहरू कोबे (पश्चिम जापानको शहर) नजिकैको सानो र शान्त शहरमा हुर्कियौं। हामीहरूको घर पचास मीटरको दुरीमा थियो र हाइस्कुलसम्म सँगै पढ्यौं पनि। सँगै यात्राहरू गर्यौं र सँगै डबल-डेट् पनि गर्यौं। दुवैजना रक्सीले टिल्ल भएर ट्याक्सीको ढोकाबाट खसेको अनुभव पनि छ। हाइस्कुलपछि म टोकियोको विश्वविद्यालयमा लागें, र ऊ होक्काइदो (उत्तर जापानको टापु) को विश्वविद्यालयमा पढ्न थाल्यो। मैले टोकियोमै जन्मे-हुर्केकी सहपाठीसँग बिहे गरें भने उसले ओतारु शहर (होक्काइदोको एउटा शहर) मा जन्मेहुर्केकी सहपाठीसँग बिहे गर्यो। बिरुवाको बीउहरू हावाले उँडाएजस्तै हामीहरू यो विशाल धरतीमा बिरलिरह्यौं।
"साँच्ची, P अहिले के गर्दै होला?" उसले सोध्यो।
"राम्रै गरिराखेको छ," मैले उत्तर दिएँ।
"केही समयअगाडि संयोगले बाटोमा भेटियो। श्रीमतीसँग पारपाचुके गरेछ र हाल भर्खरकी केटीसँग हिंड्छ रे।"
"Q को के छ हँ?"
"विज्ञापन बनाउने कम्पनीमा काम गर्छ, धेरै कपी लेखिराखेको छ त।"
"के छ, समय-समयमा कोबे फर्किंदै गरेको छौ?" मैले सोधें।
"अहँ," उसके मु्न्टो फर्कायो। "टाढा छ। तिमी?"
"फर्केको छैन। फर्किन मन पनि लाग्दैन।"
"बजार निकै फेरियो होला है।"
"ल, राम्रोसँग बस है।"
"म R शहरको प्रशासन कार्यालयको प्रचारविभागमा काम गर्छु," उसले भनी। उसको भाषामा हलुका स्थानीय लवज झल्किन्थ्यो र बोली भने आत्तिएकोले होला केही हडबडिएको थियो।
"R शहर जनसंख्या सातहजार पाँच शय भएको सानो शहर हो। त्यस्तो प्रसिद्ध पनि छैन, त्यसैले तपाईंहरूलाई यसको बारेमा थाहा नहुन सक्छ।"
"यहाँका बासिन्दाको मुख्य पेशा भनेको कृषि र डेरीउत्पादन हो। त्यसमा मूख्यत अवश्य पनि धानखेती नै हो, र हिजोआजको धानखेती घटाउने नीतिको कारणले गर्दा फटाफट गहुँ र तरकारीखेतीमा परिवर्तन हुँदैछ। र बस्तीको छेउभागमा शहरले सञ्चालन गरेको गौचरन छ, जहाँ करीब दुई शय वटा गाई, शय वटा घोडा र शय वटा भेडा पालिएको छ। यहाँमा अहिले पशुपालनको बिस्तार हुँदैछ र अबको तीन वर्षभित्रमा यो संख्या निकै नै बढ्नेछ।"
"मेइजी युग (सन् १८६८-१९१२)मा यो R शहरको नजिकै बग्ने R नदीको बालुवामा सुन भेटिएकोले निकै ठुलो चहलपहल भयो। तर बालुवाको सुन सकिएपछि त्यो चहलपहल पनि हराई केही साना घरहरूको अवशेष र पहाडतिर जाने गोरेटो मात्रै त्यसबेलाको सम्झनलायक दृष्य रहे।
"बस्तीमा... अहम्... शहरको जनसंख्या केहीवर्षअगाडिसम्म दशहजार नाघेको थियो, हिजोआज कृषि पेशाबाट अलग्गिनेहरू बढ्दै गएपछि जनसंख्या ह्वात्तै घटेको छ। युवाहरू ठुला शहर पसेर उतै हराउने कुरा चाहिं समस्या बनेको छ। मेरा सहपाठीहरू पनि आधाभन्दा बढी अन्तै सरिसके। तर यहीं बसेर संघर्ष गर्नेहरू पनि अवश्य छन्।"
मैले उसको शहरको अवस्थाको बारेमा कल्पना गरें। दिनमा आठ पटकभन्दा रेल नरोकिने स्टेसन्, स्टोभ राखिएको प्रतिक्षाकक्ष, कठ्याङ्ग्रिदो सानो रोटरी, अक्षर मेटिएर आधा पनि पढ्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको शहरको गाइड नक्शा, सयपत्रीको उद्यान र नानाकामादो (एकप्रकारको वृक्ष) का लहरहरू, जीवनदेखि थकित र फोहोरलिप्त सेतो कुकुर, उजाड तर फराकिला सडक, सैनिक-भर्नासम्बन्धी पोस्टरहरू, तीन तले डिपार्टमेन्ट स्टोर, विद्यार्थीको ड्रेस र टाउको दुखेको औषधीको साइनबोर्ड, एउटा सानो लज, कृषि सहकारी र वनस्पति केन्द्र अनि सामुहिक उत्पादन प्रवर्धन समितिका भवनहरू, खैरो आकाशतिर ठिंग ठडिएको तातोपानी स्नान पसलको एउटा चिम्नी। शहरको मध्येसडकबाट देब्रेतिर मोडिएर दुई लाइन अगाडि पुगेपछि शहर प्रशासन भवन, र त्यसको प्रचारविभागमा ऊ बसेकी छ। सानो पट्यारलाग्दो शहर। वर्षको आधाभन्दा बढी समय हिउँमा पुरिन्छ। "आगामी फलानो महिनाको फलानो दिन भेडाहरूको संक्रमण रोक्ने औषधी बाँडिंदैछ। इच्छुक महानुभावहरूले फलानो महिनाको फलानो गतेभित्र निर्धारित फारम भरेर..."
"यो मेरो शहर हो," ऊ भन्दै थिई। "यही हो भनेर सुनाउन लायकको विशेष केही छैन, तर जे भए नि मेरै शहर हो। यदि मौका मिलेमा शहरमा आइहेर्नुहोला। हामीले सेवा गर्न सक्ने केही हुन पनि सक्छ।"
सम्झनामा एक आत्मीय अग्रज
दसैँ पर्वः के किन र कसरी
म चाहन्न तिमीलाई अझै दुख दिन
संप्तरंगी टिका माला अर्को साललाई राख बैनी